ပြောင်းပြန်ရေပုံးအမျိုးအစားရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး ပြောင်းပြန်ရေပုံးအမျိုးအစားရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
HUAI-AN HARDWARE CO., LTD. ၏ခြုံငုံဖြေရှင်းချက်များအတွက်ဦးဆောင်ဒီဇိုင်နာ & ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ် ပြောင်းပြန်ရေပုံးအမျိုးအစားရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက်သုတေသန & ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, ထုတ်လုပ်မှု & ကုန်ထုတ်လုပ်မှု, Marketing, အင်ဂျင်နီယာ, စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကဲ့သို့သောစီးပွားရေးပေါင်းစည်းသော။ ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာစားသုံးသူ '' ဝယ်လိုအားအညီသစ်ဆန်းသောဒီဇိုင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
။ ကျနော်တို့အမြဲမပြတ် customer တွေရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းသို့မဟုတ်ကျော်လွန်ပါလိမ့်မည်အရည်အသွေးပြည့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုပြိုင်ဘက်ကင်းအဆင့်များကိုမည်။
ပုံစံ - ALL STAINLESS STEEL No. 701, 771, 741
DSC STAINLESS သံမဏိပါ ၀ င်သောအင်ကြင်းပိုက်ပါပိုက်ထောင်ချောက်များ
●ALL S.S.ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် CAP,
●MOP 30K 425 x ကို̊ဂ.
●DIRT နှင့် PURGE SYSTEM ကိုကိုင်တွယ်ရန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းရည်.
●LOWAD ကို AT အသေးစား dribb,အလင်းနှင့်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း,Full Load ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်.
●မဟုတ်ဘူး.771,772 Steam Trap သည် VERTICAL OR HORIZONTAL INSTALLAZZJONI အတွက်ရရှိနိုင်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.steamtraps.com.tw/my/inverted-bucket-type-steam-trap.html
သို့: HUAI-AN HARDWARE CO., LTD.
Incoterm: ကျေးဇူးပြု. ရွေးပါ EX-WORKS FOB အခြား
ငွေပေးချေမှုရမည့်: ကျေးဇူးပြု. ရွေးပါ T / T နှင့် အခြား
အကောင်းဆုံး ပြောင်းပြန်ရေပုံးအမျိုးအစားရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် ပြောင်းပြန်ရေပုံးအမျိုးအစားရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူ၊ Taiwan
DSC CAST IRON INVERTED BUCKET STEAM ထောင်ချောက်မဟုတ်ဘူး.980,991,41 ●သံသတ္တိနှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ခန္ဓာကိုယ်,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 17K x ကို 230̊ဂ. ●DSC CAST IRON INVERTED BUCKET STEAM ထောင်ချောက်များသည်သမားရိုးကျမယိမ်းယိုင်နိုင်သောယန္တရားနှင့်မူပိုင်ခွင့်ထားသောစစ်ဆေးမှုအဆို့ရှင်နှင့်ရေမပြည့်မီခြင်းကိုတားဆီးနိုင်ပြီးအရှုံးကိုတားဆီးနိုင်သည်. ●တစ်မူထူးခြားသောပေါင်းစပ်မှုများသည် DSC ၀ င်ငွေခွက်ပါသောရေနွေးငွေ့ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှစ်များတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောအချိန်နှင့်လည်ပတ်မှုပြည့်စုံချိန်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဖြစ်စေသည်။. ●DIRT နှင့် PURGE SYSTEM ကိုကိုင်တွယ်ရန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းရည်. ●အဘယ်သူမျှမချကို AT အသေးစား dribb,အလင်းနှင့်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း,Full Load ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်. ●လေပူအပူချိန်မှာလေနှင့် CO2 ထုတ်ပေး. ●နောက်ခံဖိအားကိုတွန်းလှန်နိုင်သည့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှု. ●CONDENSATE ပက်ကျိများမှချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှု. ●အစိတ်အပိုင်းအားလုံးအစားထိုးနိုင်ပါတယ်. DSC အမျိုးအစားအမှတ်.981~996
DSC CAST သံမဏိ BUCKET Steam ထောင်ချောက်မဟုတ်ဘူး.680~686F စီးရီး ●CAST သံမဏိကိုယ်ခန္ဓာနှင့် CAP,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 41K x ကို 345̊ဂ. ●DSC CASTLE သံမဏိပါ ၀ င်သောခုံးတံဆိပ်ပါသောသမရိုးကျအစဉ်အလာမရှိသောယန္တရားနှင့်မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ခလုတ်အားရေနှင့်တူသောစုပ်ယူမှုကိုတားဆီးနိုင်ပြီးအရှုံးကိုတားဆီးနိုင်သည်.တစ်မူထူးခြားသောပေါင်းစပ်မှုများသည် DSC ၀ င်ငွေခွက်ပါသောရေနွေးငွေ့ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှစ်များတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောအချိန်နှင့်လည်ပတ်မှုပြည့်စုံချိန်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဖြစ်စေသည်။. ●ဝတ်ဆင်ရန်နှင့်ခံနိုင်ရည်ခံနိုင်ရည်အတွက်အကောင်းဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ●DIRT နှင့် PURGE SYSTEM ကိုကိုင်တွယ်ရန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းရည် ●အဘယ်သူမျှမချကို AT အသေးစား dribb,အလင်းနှင့်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း,Full Load ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်. ●လေပူအပူချိန်မှာလေနှင့် CO2 ထုတ်ပေး. ●နောက်ခံဖိအားကိုတွန်းလှန်နိုင်သည့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှု. ●ရေခဲသေတ္တာမှပျက်စီးစေနိုင်သည့်ကောင်းသောခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ●CONDENSATE ပက်ကျိများမှချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှု. ●ကြီးမားသောနှိုင်းယှဉ်ရူပဗေဒအရွယ်အစား DSC အမျိုးအစားအမှတ်.681~686F
DSC STAINLESS သံမဏိပါ ၀ င်သောအင်ကြင်းပိုက်ပါပိုက်ထောင်ချောက်များမဟုတ်ဘူး.780 စီးရီး ●ALL S.S.ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် CAP,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 41K က x 425̊ဂ. ●DSC အားလုံးသောသံမဏိပါ ၀ င်သောအင်ကြင်းတုံးခုံးရိုးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ယန္တရားနှင့်ရေခမ်းနားမှုကိုကာကွယ်နိုင်သောမူပိုင်ခွင့်စစ်ဆေးမှုအဆို့ရှင်နှင့်မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်. . ●ဝတ်ဆင်ရန်နှင့်ခံနိုင်ရည်ခံနိုင်ရည်အတွက်အကောင်းဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ●DIRT နှင့် PURGE SYSTEM ကိုကိုင်တွယ်ရန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းရည် ●အဘယ်သူမျှမချကို AT အသေးစား dribb,အလင်းနှင့်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း,Full Load ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်. ●လေပူအပူချိန်မှာလေနှင့် CO2 ထုတ်ပေး. ●နောက်ခံဖိအားကိုတွန်းလှန်နိုင်သည့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှု. ●CONDENSATE ပက်ကျိများမှချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှု. ●ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုသုံးစွဲသူလိုအပ်ချက်များအရထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်:ပစ္စည်းများဆိုင်ရာလက်မှတ်,စမ်းသပ်အစီရင်ခံစာ,မူလနှင့် WPS ၏လက်မှတ်/PQR. DSC အမျိုးအစားအမှတ်.781
မြင့်မားသောဖိအား Steam ထောင်ချောက်
DSC FGED သံမဏိပိုက်ဆံပါသောပိုက်ကွန်ထောင်ချောက်မဟုတ်ဘူး.941,951 ●သံမဏိကိုယ်ထည်, ALL S.S.CAP,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 69K က x 430̊ဂ. ●ဝတ်ဆင်ရန်နှင့်ခံနိုင်ရည်ခံနိုင်ရည်အတွက်အကောင်းဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ●DIRT နှင့် PURGE SYSTE ကိုကိုင်တွယ်ရန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းရည်. ●အဘယ်သူမျှမချကို AT အသေးစား dribb,အလင်းနှင့်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း,Full Load ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်. ●လေပူအပူချိန်မှာလေနှင့် CO2 ထုတ်ပေး. ●နောက်ခံဖိအားကိုတွန်းလှန်နိုင်သည့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှု. ●ရေခဲသေတ္တာမှပျက်စီးစေနိုင်သည့်ကောင်းသောခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ●CONDENSATE ပက်ကျိများမှချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှု. ●ကြီးမားသောနှိုင်းယှဉ်ရူပဗေဒအရွယ်အစား.DSC အမျိုးအစားအမှတ်.791.941.951
DSC FGED သံမဏိပိုက်ဆံပါသောပိုက်ကွန်ထောင်ချောက်မဟုတ်ဘူး.640~စီးရီး 2500 ●သံမဏိကိုယ်ထည်, ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 186K က x 540̊ဂ. ●ဝတ်ဆင်ရန်နှင့်ခံနိုင်ရည်ခံနိုင်ရည်အတွက်အကောင်းဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ●DIRT နှင့် PURGE SYSTEM ကိုကိုင်တွယ်ရန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းရည် ●အဘယ်သူမျှမချကို AT အသေးစား dribb,အလင်းနှင့်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း,Full Load ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်. ●လေပူအပူချိန်မှာလေနှင့် CO2 ထုတ်ပေး. ●နောက်ခံဖိအားကိုတွန်းလှန်နိုင်သည့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှု. ●ရေခဲသေတ္တာမှပျက်စီးစေနိုင်သည့်ကောင်းသောခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ●CONDENSATE ပက်ကျိများမှချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှု. ●ကြီးမားသောနှိုင်းယှဉ်ရူပဗေဒအရွယ်အစား.DSC အမျိုးအစားအမှတ်.640-2500
Bypass Valve ဖြင့်ရေနွေးငွေ့
DSC CAST IRON INVERT BUCKET STEAM ထောင်ချောက်အား BYPASS Valve နှင့်အတူမဟုတ်ဘူး.981K~995K ●သံသတ္တိနှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ခန္ဓာကိုယ်,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 17K x ကို 230̊ဂ. ●DSC INVERTED BUCKET Steam ထောင်ချောက်များသည်သာလွန်ထူးကဲသောအရည်အသွေးနှင့်တာရှည်ခံခြင်းအသက်တာ၏ဂုဏ်သတင်းရှိသည်။. ●BYPASS Valve သည်အလုပ်ချိန်ကိုသက်သာစေရန် TRAP CAP တွင်အင်ဂျင်နီယာအသစ်များဖြစ်သည်,fittings,နေရာမှအကွာအဝေးနှင့်ဖြစ်နိုင်သောယိုစိမ့်မှု. ●ဒီဇိုင်းအသစ်သည်တစ်ခုတည်းတွင်ပြီးပြည့်စုံသောအ ၀ င်အထွက်ခလရထောင်ချောက်နှင့်အတိုင်ပင်ခံအဆို့ရှင်၏ကောင်းမွန်သောလက္ခဏာများကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။. ●ရွေးချယ်မှု Theme Connector သို့မဟုတ်မှုတ် Valve ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်,မှာယူပါ. DSC အမျိုးအစားအမှတ်.981K~995K